खगराज र महेशलाई ठेगान लगाउने यी हुन् कांग्रेसका तीन महिला सांसद - हिमाल दैनिक
खगराज र महेशलाई ठेगान लगाउने यी हुन् कांग्रेसका तीन महिला सांसद
१३ जेष्ठ २०७६, सोमबार १६:३९
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जहिलेसुकै सरकारका प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरुसँग विपक्षी दलका सांसदहरुले कुनै पनि विषयमा प्रश्न वा जिज्ञासा राखे भने त्यसले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई भन्दा पहिले सत्तापक्षका दुई सांसदलाई बिझाउँदै आएको छ। त्यी दुई सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरु हुन, खगराज अधिकारी र महेश बस्नेत।
खासगरी विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका कुनै सांसदले सरकारको विषयमा जस्तो सुकै प्रश्न गरुन् त्यसको सम्बन्धित मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिन पालो पाउँदैनन्। त्यो भन्दा पहिले नै अधिकारी र बस्नेतले जवाफ दिन हतारो पर्छ।
सोमबारको प्रतिनिधि सभामा पनि त्यहि घटना दोहोरियो। आइतबार राजधानीमा भएको वम विष्फोटनको विषयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जानकारी दिएलगत्तै विपक्षी दलका सांसदले प्रश्न गर्न नपाउँदै यी दुई सांसदले जवाफ फर्काउन सुरु गरे।
तर, विगतको तुलनामा सोमबारको उनीहरुको प्रस्तुतीलाई विपक्षी दल कांग्रेसका तीन महिला सांसदले नै काण्ड पुर्याइदिए।
खगराज अधिकारी र महेश बस्नेतले के भने? प्रतिवाद गर्दै कांग्रेसका तीन महिलाले के भने?
खगराज अधिकारीः यो हिंसात्मक गतिविधिहरुलाई नियन्त्रण गर्न र यसको रोकथाम गर्न सरकारले दुइटै प्रक्रिया अपनाएको देखियो। एउटा हिंसात्मक गतिविधिलाई राज्यले नियन्त्रण गर्ने र अर्को वार्ता, सम्वाद सुरु गर्ने। यो काम जारी छ भन्ने कुरा गृहमन्त्रीले जानकारी दिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। गृहमन्त्रीजीले प्रष्ट पार्दै यो हत्या हिंसामा जसको मृत्यु भएको छ त्यीनीहरु अपराधपूर्ण क्रियाकलापमा संलग्न भएका र निक नाम समेत उहाँले स्पष्ट गर्दै उनीहरुमा नागरिकको जस्तो व्यवहार नगरी गैरनागरिक व्यवहार गर्ने मानिसहरुको नाम पनि दिनु भएको छ। यस क्रममा सरकारले अझ यी गतिविधिहरु नियन्त्रण गर्र्न र यो हिंसामा परेका नागरिकहरुलाई र यो गतिविधिहरुमा संलग्न भएकाहरुलाई अलग गरेर सामान्य नागरिकहरुको दिन सामान्य बनाउन अझ जोडदार गतिविधि चलाओस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु।
महेश वस्नेतः म आज सदनमा १० मिनेट ढिला आइपुगेँ। कोटेश्वरको जाम अघिपछि भन्दा १० मिनेट बढि देखियो। किन भने आज विप्लव समूहको बन्दलाई जनताले अस्विकार गरेका छन् भन्ने कुराको एउटा प्रमाण त्यहि हो। दोस्रो कुरा हिँजोको बमकाण्डमा संलग्न रहेका अपराधीहरुलाई सरकारले समातेको छ। तिनिहरु अपराधी हुन तिनिहरु सर्वसाधारण होइनन् भन्नेकुरा गृहमन्त्रीले जुन जवाफ दिनुभयो त्यसमा मेरो पूर्ण समर्थन छ र यसका लागि गृहमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तेस्रो कुरा पाँचथरमा जुन घटना घट्यो त्यसमा सिआइबीको विशेष टोली पठाएर गृहमन्त्रालयले उचित पहल कदमी लिएको छ। मेरो प्रश्न छ, मृतकलाई क्षतिपूर्ति दिनेकुरा र घाइतेलाई उपचार गर्ने कुरा र अपराधीहरलाई कारबाही गर्ने कुरामा तत्काल कदम चाल्नु पर्छ। र विप्लव समूहलाई जुन खालको प्रतिबन्ध लगाएको छ यसको लागि यसमा हाम्रो पूर्ण समर्थन छ। कतिपय माननीयज्यूहरुले बम पड्काएको कुराको पनि विरोध गर्नु हुन्छ र प्रतिबन्ध लगाएको कुराको पनि विरोध गर्नु हुन्छ। यो दोभाषे कुरा नर्गनका लागि माननीयज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र पाँचथर घटनाका अपराधीहरुले आत्महत्या गरेको भन्ने कुरा सुनिएको छ। त्यो अपराधीलाई समाउनका लागि स्वर्गमा रहेका गृहमन्त्रीज्यूहरुसँग छलफल गर्नु पर्छ भने पनि र प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग सहकार्य गर्नु पर्छ भने पनि गृहमन्त्रीज्यूले पहल गर्नु होस्।
पार्टी अनुसार बन्दको प्रभाव
आज विप्लप समूहले गरेको बन्दको प्रभाव पार्टी अनुसारः सत्तापक्षलाई नेपाल ‘बन्दै’ छ, प्रतिपक्षलाई ‘बाट्टो’ खाली…खगराज र महेशलाई ठेगान लगाउने यी हुन् कांग्रेसका तीन महिला सांसद:https://himaldainik.com/2019/05/27/63696/
Posted by Himal Dainik on Monday, May 27, 2019
लक्ष्मी परियारः गृहमन्त्रीजीले पहिलो जवाफमा हिँजो मात्रै भएको बम काण्डमा मृत्यु भएका व्यक्तिहरु नागरिक होइनन् भन्नु भएको छ। उनीहरु नेपाली नागरिक होइनन् भने कहाँका नागरिक हुन् त्यसको जवाफ चाहियो। अर्कोकुरा माननीय सांसदहरु हामी यहाँबाट प्रश्न सोधीराखेका छौँ। हामीले गृहमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्दा उतापट्टीका माननीयज्यूले जवाफ दिनु उचित छ कि छैन? यो सभामुखबाटै हामी जवाफ चाहन्छौँ। अब नेपाली नागरिकहरुले कहिलेसम्म अनागरिक बन्दै हिँड्नु पर्ने हो? र गृहमन्त्रीज्यूले को कोलाई अनागरिक बनाउँदै हुनुहुन्छ जवाफ चाहियो।
पार्वता डिसी चौधरीः म बालकोट बस्छु। आज बालकोटबाट आउँदा पाँच मिनेटमा यहाँ आइपुगेँ। बाटो खुल्ला थियो। गृहमन्त्रीज्यूले मृत्यु हुने नेपाली नागरिक होइनन् भन्नु भयो, त्यी नेपाली नागरिक होइनन् भने कुन देशका नागरिक हुन? त्यी नागरिकहरु जीवतै हुँदा नागरिक नभएका हुन् कि मृत्युपछि अनागरिक भएका हुन्? पाँचथरमा दुई परिवारको वंश नाश भएको छ। यसको सत्य र तथ्य के हो? बाहिर आओस्। एउटै व्यक्तिले त्यो विभत्स हत्या गर्न सक्दैन। गाउँलेहरुको पनि यहि भनाई छ।
रंगमती शाहीः म वनस्थलीबाथ आउँछु। सदनमा आउँदा मलाई जहिले पनि एक घण्टा लाग्थ्यो, आज म २० मिनेटमा आइपुगेँ। वनस्थली रुटका गाडीहरु आज सबै कोटेश्वरमा गएका रहेछन् कि क्या हो?
Prevपछिल्लोविप्लवको बारेमा विपक्षी सांसदले प्रश्न गरेपछि यस्तो आक्षेप लगाए गृहमन्त्रीले
अघिल्लोअन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन विधेयक स्वीकृतNext